5-htp - J & S Botanics
Resadresaka / QC
5-htp indrindra fantatra koa amin'ny hoe oxitriptan (Inn) dia nalaina avy amin'ny voan'ny iray rehefa niakatra Woody mahantra teratany any Afrika Andrefana, antsoina hoe Griffonia simplicifolia fototra.
Inona no 5-htp?
5-htp na "L-tryptophan hydroxy" (5-Hydroxytryptophan) dia mazava ho-nitranga asidra asidra sy ny mpialoha làlana sy ny metabolic fanelanelanana tao amin'ny biosynthesis ny neurotransmitters serotonin sy melatonin avy tryptophan. 5-htp dia niova fo tao amin'ny neurotransmitter serotonin (5-HT), miaraka amin'ny fanampian'ny vitaminina B6.This miseho any natahotra sela sy ny aty. 5-htp hiampita ny ra-atidoha sakana (raha 5-Tsy manao HT). Supplementation amin'ny 5-htp Koa dia mampitombo famokarana serotonin.
5-htp soa ara-pahasalamana
Be mpampiasa mba hanampy amin'ny matavy loatra (manasatra), pms, migraines, fahaketrahana, fanahiana, fahitan-tory sy ny fitondran-tena mampiankin-doha. 5 htp dia mampitombo famokarana serotonin. Serotonin haavon'ny ao amin'ny rafi-pitatitra dia tena ilaina ho an'ny maro lafiny amin'ny fiainantsika andavanandro. Serotonin dia tompon'andraikitra amin'ny fihetseham-po ny soa indrindra ary ho afa-po sy ny ara-dalàna ny torimaso lamina. Matavy loatra, pms, migraines, fahaketrahana, fanahiana, fahitan-tory sy ny fihetsika mampiankin-doha daholo no mifandray amin'ny ambaratonga ambany ny serotonin. Serotonin tena ilaina eo amin'ny fifehezana fahatezerana, herisetra, vatana mari-pana, toe-po, ny torimaso, firaisana ara-nofo, fahazotoan-komana, ary ny metabolism, ary koa ny manaitra mandoa.
Misy mihevitra ny somebiseby erỳ ankehitriny ny adin-tsaina sy ny fomba fiaina ratsy ny fahazarana misakafo mampihena ny fankamamiantsika serotonin sehatra ao amin'ny vatana. Tsy fantatra fa mora tezitra, herisetra, tsy faharetana, ny tebiteby sy ny antony mampiahiahy ny vatana halefa serotonin. Izany serotonin dia mila feno ny fanao amin'ny vatana avy amin'ny sakafo no mihinana. Fa serotonin dia tsy hita ao amin'ny be dia be amin'ny ankamaroan'ny sakafo toy izany koa ny vatana tsy maintsy manao izany mihitsy hanina, izay ahitana L-tryptophan, toy ny sôkôlà, oats, akondro, maina daty, ronono, yogurt, trano rantsan-kazo fromazy, hena, trondro, Torkia , akoho, Sesame, voanjobory asiana, ary voanjo. Maro koa ny olona mitady mafy ny sakafo voatanisa (menaka sy ny gliosida), indrindra rehefa miady saina, ka mahatonga lanja harena, ny fahaketrahana, ny aretin'andoha, ary ny hozatra maharary.
Atkins Diet - hampihena ny fanirian'ny
Pitsaboana fanadihadiana dia nampiseho fa supplementing amin'ny 5-htp mamokatra vokatra tsara amin'ny levitra, ny tebiteby ary ny fahaketrahana. Manatsara ny torimaso izany lamina sy mampihena carbohydrate fanirian'ny ao amin'izay eo ambany carbohydrate sakafo (toy ny The Atkins Diet). Na iza na iza mampiasa levitra fandaharana mitovy amin'ny Atkins Diet afaka mahatsapa ny fampihenana ny serotonin ambaratonga noho ny zava-misy fa mandrisika serotonin famokarana gliosida ao amin'ny vatana. Serotonin famoahana dia niteraka iray carbohydrate entana (siramamy sns) ary izany dia nihevitra izany no mahatonga matetika isika no mitady mafy gliosida miady saina rehefa te-mandrisika serotonin izany fanafahana. Rehefa atidoha mahatonga serotonin, fihenjanana is nihena. Mifanohitra amin'izany ny atidoha rehefa miteraka dopamine na norepinephrine (noradrenaline) isika dia mirona amin'ny mieritreritra sy manao zavatra haingana kokoa, ary amin'ny ankapobeny mailo kokoa. Koa mihinana gliosida toa manana mampitony vokany, raha mitombo proteinina mailo.
5-htp nitondra fanampin-tsakafo misy mahasakana izany maniry ho tavy sy gliosida, ary koa ny fanomezana ny vatana miaraka amin'ny fitaovana mifehy hafa ireo asa rehetra voatanisa etsy ambony, toy ny fahatezerana, fahazotoan-komana sy hatory.
Hanampy tamin'ny Fahaketrahana sy ny tebiteby
Nisy fikarohana natao ho 5-htp, ary mampiseho izany no mety mba hanampy tamin'ny kivy ary mety fanahiana, tahotra aretina, matory aretina sy ny matavy loatra. 5-htp toa manana fiantraikany toy izany koa ho toy SSRI (Fifantenana Serotonin Re-uptake inhibitors) antidepressants.
Levitra izay manangana serotonin haavon'ny no voalaza ho an'ny zava-manahirana rehetra ireo, fa maro no mino 5-htp dia fomba hanatanterahana voajanahary toy izany.
Ho fanatsarana ny torimaso, dia be nanolorana azy ho haka 5-htp 30 minitra alohan'ny hatoriana, toy ny afa-tsy mamokatra Serotonin, 5-htp ihany koa ny mahatonga Melatonin, izay nitarika ny torimaso-hormonina. Ny mahazatra dia na ny levitra 50mg na 100mg tablette. Ny vokatry ny maka 5-htp azo tsapa ao anatin'ny 10 ka hatramin'ny 30 minitra.
Miezaha mba hividy 5-htp izay ihany koa misy vitaminina B6, toy ny vit B6 ilaina ho 5-htp fiovam-po an-serotonin.
Fatrany ambony be toa ilaina levitra sy hampihenana migraines. Dosages hatramin'ny 900mg isan'andro manodidina toa ho be tatitra.
5-htp dia matetika leferina kokoa noho ny nentim-paharazana antidepressants. Mihoatra 5-htp Misy mihevitra ho metabolized sy excreted, indrindra rehefa nalaina tamin'ny Vitamin B6.
Nahoana raha manandrana ny sasany amin'izao fotoana izao ary jereo raha ianao koa dia afaka mampihena ny fanirian'ny, adin-tsaina sy ny fahatezerana ambaratonga, ary koa ny mahazo tsara ny matory alina!
Post fotoana: Dec-13-2016
5-htp Soa Indrindra 5-htp fantatra koa amin'ny hoe oxitriptan (Inn) dia nalaina avy amin'ny voan'ny iray rehefa niakatra Woody mahantra teratany ...
Bee Products: Ny Original Supe ...
Tantely fiompy ny mpandefitra dia iray amin'ireo natiora ny zavamananaina manan-danja indrindra. Zava-dehibe noho ny tantely ny famokarana sakafo fa ...